Conor McGregor oo dab ku sii shiday xanta sheegeysa inay fooda is dari karaan Floyd Mayweather….(Kulan la wada sugayo)+SAWIRRO – Gool FM
Conor McGregor oo dab ku sii shiday xanta sheegeysa inay fooda is dari karaan Floyd Mayweather….(Kulan la wada sugayo)+SAWIRRO
Byare May 17, 2016
(America) 16 Maajo 2016. Xiddiga UFC Conor McGregor ayaa dab ku sii shiday xanta ahayd inay fooda is dari karaan xiddiga Boxing-ka ee Floyd Mayweather kaddib markii uu bartiisa Twitterka soo dhigay sawir ah kabaha feerka ama Boxing-ka isla markaana raaciyay muuqaal isagoo tababar feer ah sameynaya.
Waxay tani tilmaam u noqon kartaa in xiddiga ciyaara dagaalka aan wax la isku reeban ee MMA McGregor uu isku diyaarinayo ciyaar ay suuro gal tahay inuu la yeesho boqorka feerka ee Mayweather kaa oo ka fariistay ciyaaraha isagoon marna laga adkaan.
Waxaa maalmahaanba cirka isku shareerayay inay kulan feer ah isku qabtaan labadan nin ee sida kala duwan u feertama waliba kulan lagu sheegay kii ugu qaalisanaa ebid billion dollar mega-fight.
Mayweather oo isagu aan marna dhulkiisa dhinaca la dhigin 49-feer uu galay ayaa dhankiisa dab ku sii shiday suuro galnimada inuu dib uga soo laabto masraxa dagaalka isagoona tilmaamay inuu kaliya la dagaalayo Conor McGregor haddii ayba noqoto inuu dib u soo laabto.
“Haddii ay noqoto inaan dagaalamo, waxaan kaliya oo la dagaali doonaa Conor McGregor,” Sidaa ayuu u sheegay ESNews.
“Taa ayaa noqon doonta dagaalkeyga kaliya mana noqon doonto cid kale, maxaa yeelay aad ayay u xiiso badan tahay.”.
Yaa ku guuleystay gool dhalinta horyaalka Soomaaliya ee xilli ciyaareedkan?+SAWIR
Liverpool oo war farxad leh helaysa ka hor kulanka habeen dambe ee Final-ka Europa League